အသက်ရှင်ဖို့နေရာတစ်နေရာရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello | USAHello
သငျသညျအသကျရှငျဖို့နေရာရှာကြသည်? USA တွင်အိမ်ရာကိုမကြာခဏစျေးကြီးသည်. ဒါဟာဘေးကင်းလုံခြုံရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်anice ရာအရပျကိုရှာတှေ့ဖို့ခက်စေခြင်းငှါ. သင်တို့သည်လည်းအသက်ရှင်ရန်နေရာတစ်နေရာရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုနေဖြင့်ရောထွေးစေခြင်းငှါ. ဤစာမျက်နှာကိုဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်အကြောင်းကိုအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များပေးပါသည်, အသကျရှငျအနီးအိမ်နီးချင်းများ, အိမ်ပြန်ပိုင်ဆိုင်မှု.
သင့်အိမ်အရေးပါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတစ်ဦးစကားပုံရှိပါသည်: “စိတျနှလုံးသည်အဘယ်မှာရှိမူလနေရာဖြစ်သည်။” ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်သောနေရာများ - - ငါတို့သည်ကိုချစ်သင်္ကေတကိုလူများနှင့်အရာတို့ကိုဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်များကိုဆိုလိုသည်. အများစုကဒုက္ခသည်တွေဟာသူတို့ရဲ့အသစ်နေအိမ်များအတွက်မာနကိုယူ. လုံခြုံရှိခြင်း, အသက်ရှင်ဖို့အဆင်ပြေရာအရပျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအိမ်မှာတူခံစားရစေပါကူညီပေးပါမည်. ဒုက္ခသည်အိမ်ယာလိုအပ်ချက်တစ်ခုချင်းစီကိုမိသားစုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောများမှာ, ဒါပေမဲ့ကနေရှေးခယျြဖို့နေအိမ်များအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများရှိပါတယ်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနေအိမ်များတိုက်ခန်းများရှိနိုင်ပါသည် (ပိုကြီးတဲ့အဆောက်အဦးတစ်ခု Self-ပါရှိသောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းအိမ်သူအိမ်သား. သငျသညျတစ်အိမ်မှာငှား, သင်သည်ပိုင်ရှင်မှလစဉ်လတိုင်းအနေနဲ့ငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ရပါမည်. သင်တစ်ဦးငှားရမ်းလက်မှတ်ထိုးပါလိမ့်မယ်, သငျသညျလတိုင်းသည်သင်၏ငှားများနှင့်အခြားဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်တစ်ခုသဘောတူညီချက်အရာဖြစ်ပါသည်.
shared အိုးအိမ်သင်အမေရိကန်တွေကိုခေါ်ရာနှငျ့တအိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားဆိုလိုတယ် အခန်းဖော် - သင်နှင့်သင့်မိသားစုနှင့်အတူအိမ်တည်းသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်သောအခြားလူများ. သင်ငှားခြင်းနှင့် utilities ၏ကုန်ကျစရိတ်ခွဲနိုင်သောကြောင့်ဒါဟာမကြာခဏသင့်ကိုယ်ပိုင်ရာအရပျငှားရမ်းခြင်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ် (လျှပ်စစ်မီး, အပူစသည်တို့ကို). များသောအားဖြင့်လူတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိပ်ခန်းရှိပြီးသူတို့တစ်တွေဧည့်ခန်းကိုမျှဝေ, မီးဖိုချောင်နဲ့ရေချိုးခန်း.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အိမ်ဝယ်ယူစျေးကြီးသည်. သင်တစ်ဦးနေအိမ်မဝယ်ရတဲ့အခါ, သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးကိုချပေးချေမှုများအတွက်ဆပ်ဖို့ပိုက်ဆံကယ်တင်ပြီဖို့လိုအပ် (အိမ်သူအိမ်သားများစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏ရာခိုင်နှုန်း), ပြီးတော့သင်မကြာခဏအိမ်၏ကြွင်းသောအရာများအတွက်ဆပ်ဖို့ပိုက်ဆံချေး. တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လသင်ချေးငွေကိုဘဏ်ရန်သင့်ပေါင်နှံငွေပေးချေမှုပေးဆောင်. သင်တစ်ဦးနေအိမ်မဝယ်ရတဲ့အခါ, သင်သည်အခြားကုန်ကျစရိတ်လည်းရှိ, အာမခံအပါအဝင်, အခွန်နှင့်အိမ်ပြုပြင်.
ငှားဖို့နေရာတစ်နေရာရှာတွေ့ခဲယဉ်းသည်. တတ်နိုင်ငှားရမ်းမှုများအဘို့အပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးအမြဲရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦးကန့်သတ်ဝင်ငွေပေါ်မှာအသက်ရှင်ဖို့နေရာရှာနေကြသောအခါအိမ်ရာနှစ်မျိုးရှိပါသည်သင်တို့အဘို့ကြိုးစားနိုင်:
မြို့ကြီးများတွင်နှင့်အချို့သောသေးငယ်သူတို့ကို, ဝင်ငွေနည်းပြည်သူများအတွက်အိုးအိမ်များကို non-profit အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရအေဂျင်စီများရှိပါတယ်. ကံမကောင်းစွာပဲတတ်နိုင်အိမ်ရာအဘို့ရှည်ချောင်းမြောင်းများသောအားဖြင့်လည်းမရှိ. ဒါပေမယ့်တတ်နိုင်အိမ်ယာသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာရှိလြှငျ, ယင်းစောင့်ဆိုင်းစာရင်းတွင်ရဖို့ကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးကအိုးအိမ်အကြံပေးခြင်းအေဂျင်စီတတ်နိုင်အိုးအိမ်ရရှိနိုင်ပါသည်သင်သည်အဘယ်သို့ပြောပြနိုင်. သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးအယပ်မှရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ဒေသခံပြည်သူ့အိမ်ရာအေဂျင်စီများ နှင့် အကြံပေးခြင်းအေဂျင်စီများ သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာ.
သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်း၌ဒေသခံတစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် FindHello. သင်၏ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ, ထို့နောက်သင့်မြို့ကိုရှေးခယျြ. ထိုအခါကို select “အိမ်ရာ & စားနပ်ရိက္ခာ။” သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်စာရင်းဘာမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အင်တာနက်ပေါ်မှာရှာဖွေရေး. ပုံစံ “အတွက်တတ်နိုင်အိမ်ရာ [သင့်ရဲ့မြို့၏နာမကိုအမှီ].”
စျေးပေါပုဂ္ဂလိကငှားရမ်းမှုများအဖြစ်မကြာမီသူတို့ကြော်ငြာနေကြသည်အဖြစ်ဖြည့်ရ. သင်ကအကောင်းဆုံးစာရင်းများရှာပြီးနေ့တိုင်းသူတို့ကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. အသစ်သောကြော်ငြာများကို posted အခါအချို့ကစာရင်းများစာမကျြနှာသငျသညျကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်. ဒီမှာတစ်ခုစာရင်း အကောင်းဆုံးတိုက်ခန်းငှားရမ်းက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် app များကို. အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက် Craigslist ငှားရမ်းခြင်းများအတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးဆိုဒ်ကိုဖြစ်ပါတယ်. သို့သော် Craiglist အပေါ်, သင်လိမ်ဖို့ကြိုးစားနေလူများသတိထားရန်ရှိသည်. ကြော်ငြာများအချို့သည်လိမ်လည်မှုဖြစ်ကြောင်း. အွန်လိုင်းမည်သူမဆိုငွေသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုပေးပို့ဘယ်တော့မှမ. သင်တစ်ဦးသဘောတူညီချက်ရှိသည်သည်အထိသင်ကငှားပေးဆောင်ဖို့လိုတယ်ဘယ်တော့မှ.
သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်ရာအရပျကိုငှားချင်, သင်ရုံလူတစ်ဦးထက်ပိုအထူးသဖြင့်လျှင်. သငျသညျအိမျကိုသို့မဟုတ်တိုက်ခန်းကိုဝေမျှထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်မူကားမကြာခဏသင်သည်တစ်နေရာရာကိုရှာတွေ့၏ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်. ဤသည်ကြီးမားသောအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်ငှားရမ်းခအလွန်မြင့်မားများမှာဘယ်မှာကိုးကား. မျှဝေခြင်းရုံငှားမမျှဝေအဓိပ္ပာယ်, ဒါပေမဲ့တခြားအလုပ်လုပ်လူကြီးများနှင့်အတူအပေါငျးတို့သညျအခွားကုန်ကျစရိတ်မျှဝေ. သင်မျှဝေပြင်ဆင်ထားရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်အမှန်တကယ်တစ်ပိုကောင်းသလိုအရပ်ဌာန၌တက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါ, ပိုပြီးအာကာသနှင့်အတူတစ်ခုသို့မဟုတ်ခြံနှင့်အတူ, အခန်းဖော်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပိုကြီးတစ်ခုခုတတ်နိုင်သောကွောငျ့.
သင်တစ်ဦးနေအိမ်ငှားရမ်းနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအများအပြားအခွင့်အရေးရှိသည်. သငျသညျသန့်ရှင်းသောသူတစ်ဦးအရပျ၌အသက်ရှင်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်, အဘယ်သူမျှမ bug တွေရှိပါတယ်, နှင့်အပူနှင့်ရေရှိပါတယ်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, တစ်ဦးအိမ်ရှင်ကသင်တို့တဘက်၌ခွဲခြားမှုမခံနိုင်သောဥပဒေရှိပါတယ်. ဒါကအိမ်ရှင်ကသောကြောင့်, သင့်ရဲ့လူမျိုးကိုသင့်ငှားရမ်း application ကိုမှမဟုမဆိုနိုင်ဆိုလိုသည်, လူမျိုးစု, သို့မဟုတ်ဘာသာရေး. လူတွေကသင့်ရဲ့တိုက်ခန်းနှင့်အဘယ်သို့သင့်ရဲ့အိမ်ရှင်ကသင်တို့အဘို့အပေးရမညျအတွက်အသက်ရှင်နိုင်မည်မျှ ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များအတွက်တိကျသောဥပဒေများလည်းရှိပါတယ်. Hud.gov အိမ်ရာနှင့် ပတ်သက်. တစ်ခုပညာရေးဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအကွောငျးကိုသငျယူနိုငျပါတယျ အိုးအိမ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု နှင့် အိမ်ငှားအခွင့်အရေးများ သင့်ရဲ့ပြည်နယ်.
တစ်ဦးကငှားရမ်းသငျသညျအသကျရှငျဖို့နေရာငှားတဲ့အခါသင်လက်မှတ်ထိုးကြောင်းရေးသားထားသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါငှားရမ်းသင်နှင့်အိမ်ရှင်ကအကြားသဘောတူညီချက်သည်, အဆိုပါငှားရမ်းယူနစ်၏ပိုင်ရှင်. ငှားရမ်းခြင်းအတွက်, သငျသညျအသီးအသီးတစ်လအချိန်ပေါ်တွင်သင်၏ငှားနှင့်ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ဖို့သဘောတူနှင့်အိမ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးလုံခြုံပြီးသန့်ရှင်းပေးရန်သဘောတူ (အဘယ်သူမျှမချွတ်ယွင်းချက်များနှင့်အတူသန့်ရှင်းတဲ့) အငှားယူနစ်.
သင်သည်သင်၏ငှားရမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုမီ, အိမ်ရှင်ကနှင့်အတူငှားရမ်းယူနစ်ကိုကြည့်ဖို့သေချာပါစေ. ကျိုးပဲ့မှုအရာရှိလြှငျ, သို့မဟုတ်ထိုအရပ်ကိုညစ်ပတ်လျှင်, ငှားရမ်းခြင်းအပေါ်ကြောင်းချရေးမှအိမ်ရှင်ကမေးမြန်း. ဒါကလမ်းသင်ဘာမှကိုချိုးဖျက်သို့မဟုတ်ပါကညစ်ပတ်ပေရေဖြစ်စေခြင်းငှါမအကြာတွင်အထောက်အထားရှိသည်လိမ့်မယ်.
သင်ပထမဦးဆုံးအတွက်ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါ, သင်တစ်ဦးကလုံခြုံရေးသိုက်ဆပ်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါ. ဒါကပိုက်ဆံသငျသညျအမှု၌ထုတ်ရွှေ့သည်အထိသင်သည်သင်၏ငှားပေးဆောင်ကြဘူးသို့မဟုတ်သင်ငှားရမ်းယူနစ်သည်အလွန်ညစ်ပတ်စေခြင်းနှင့်သူတို့ကသန့်စင်ရှိသည်ဖို့ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လျှင်အိမ်ရှင်ကနေဖြင့်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ငှားပေးဆောင်နှင့်သင်တို့အထဲကရွှေ့သည့်အခါတိုက်ခန်း clean အကယ်., ထို့နောက်သင်သည်သင်၏သိုက်ပိုက်ဆံသင်တို့ဆီသို့ပြန်လာသောရသင့်တယ်. တချို့ကငှားရမ်းခွင့်နောက်ကျောကိုသင့်သိုက်ရရန်အလို့ငှာ၌သင်တို့ကော်ဇော clean ရန်သင့်အားလိုအပ်. သင်၌ပြောင်းရွှေ့ရသောအခါသင့်ရဲ့တိုက်ခန်းအတွင်းကော်ဇောသန့်စင်ခဲ့သည်ဆိုပါကစစျဆေးဖို့သေချာပါစေ. ထိုသို့သန့်စင်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်ကော်ဇော clean ရန်မလိုပါကြောင်းရေးသားထားရန်အိမ်ရှင်ကတောင်း. သင်ကော်ဇော clean ရန်ရှိသည်ဘူးဆိုရင်, သငျသညျအစားကော်ဇောသန့်ရှင်းရေးမယ့်ကုမ္ပဏီပိုက်ဆံအများကြီးဆပ်ဖို့ရှိခြင်း၏အနိမ့်သောစျေးနှုန်းများအတွက်စက်ကိုငှားလို့ရပါတယ်.
စာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်များလတယောအရေအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်. အများစုမှာငှားရမ်းခွင့်ခြောက်လသို့မဟုတ်တစ်နှစ်ဖြစ်ကြောင်း. သင်တို့သည်လည်းတစ်လမှတစ်လငှားရမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်စေခြင်းငှါ. ဒီသင်ချင်တယ်ဆိုအချိန်ထွက်ရွှေ့နိုင်ဆိုလိုသည်. သို့သော်, သင်ဆဲသာမန်အားဖြင့်သင်ကရွှေ့မည်ကြောင်းအိမ်ရှင်ကကြိုတင်မဲအတွက်တစ်လပြောပြရန်ရှိသည်မယ်လို့နှင့်သင်သည်သင်၏သဘောတူညီချက်၏အဆုံးတဆင့်ငှားပေးဆောင်ရပါမည်.
အများစုမှာငှားရမ်းခွင့်ကာလ၏အခြို့အရေအတွက်အားပေးစေခြင်းငှါသင်တို့ကိုတောင်းမည်’ သငျသညျအထဲကရွှေ့မတိုင်မီအသိပေးစာ. သင်သည်သင်၏ငှားရမ်းထဲကရွှေ့သွားနေတယ်ဆိုရင်, သင်ရွေ့လျားပါလိမ့်မည်သင့်ရဲ့အိမ်ရှင်ကပြောပြရန်လိုအပ်ပါတယ်မည်မျှရှေ့ဆက်အချိန်ရဲ့နေ့ရက်တို့ကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်ငှားရမ်းခြင်းစစျဆေးဖို့သေချာပါစေ.
ဘယ်အချိန်မှာသင်သည်အသက်ရှင်ဖို့နေရာရှာတွေ့, သင်အချိန်ပေါ်တွင်သင်၏ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျဖြစ်နိုင်မေးလ်ထဲမှာလျှပ်စစ်မီးနှင့်အခြား utilities များအတွက်ဥပဒေကြမ်းများရလိမ့်မယ်.
ငှားပုံမှန်အားဖြင့်လ၏ပထမဦးဆုံးပေါ်သို့မဟုတ်သင်ပထမဦးဆုံးအတွက်ပြောင်းရွေ့သောလတစ်လ၏နေ့၌ကြောင့်. အမြဲတစ်စစ်ဆေးမှုများအသုံးပြုပြီးသင့်ငှားဆပ်ဖို့ကြိုးစားပါ, အစားငွေသား၏. သင်ပေးဆောင်ကြောင်းအထောက်အထားရှိသည်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းတစ်ဦးလက်ခံရရှိတောင်း.
သင့်ရဲ့စာတိုက်ပုံးတည်ရှိရာသင့်ရဲ့အိမ်ရှင်ကမေးပါနှင့်မှန်မှန်သင်၏မေးလ်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ. သငျသညျကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်သင်ကစာတိုက်မှာပုံစံဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်မည်. သင်ကဖြည့်စွက်ရတဲ့အခါ, သင်၏မေးလ်အသစ်ရဲ့လိပ်စာမှာသင့်အားစေလွှတ်တော်မူလိမ့်မည်.
အများအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏လျှပ်စစ်မီးအပါအဝင်သင့်ရဲ့ utilities များအတွက်ပေးဆပ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ရေနံ, ရေ, တီဗီ / အင်တာနက်, တယ်လီဖုန်း, အသုံးမရသောအရာ, အပ်ချုပ်သူ, စသည်တို့ကို. တခါတလေ, အချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကို utilities သင့်ရဲ့ငှားတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်, သို့သော်သင်သီးခြားစီသူတို့ကိုဆပ်ဖို့ရှိသည်အချိန်အများစုကို. သငျသညျအနိမ့်သည်သင်၏အပူကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဗိမာန်တော်၌နွေးအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်သင့် utilities အပေါ်ပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျ, နှင့်အလင်းအိမ်ပိတ်ခြင်းနှင့်သူတို့မလိုအပ်သည့်အခါအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေ unplugging အားဖြင့်.
အိမ်တအိမ်ဝယ်ယူဖြစ်ကောင်းသငျသညျအစဉျအမွဲစေမည်အကြီးဆုံးဝယ်ယူဖြစ်ပါသည်. သင်တို့အဘို့အဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များအများကြီးရှိပါတယ်, ဘဏ်, နှင့်အိမ်တွင်ရောင်းချနေပုဂ္ဂိုလ်အဘို့. အိမ်ရာနှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးအမေရိကန်ဦးစီးဌာနရှိပါတယ် သင်ပထမဦးဆုံးအိမ်ပြန်ဝယ်ယူအကြောင်းကိုအကြီးအသတင်းအချက်အလက်များ နှင့်ဦးပထမဦးဆုံးအချိန်နှင့်ဝင်ငွေနည်းအိမ်မှာဝယ်လက်များအတွက်အစီအစဉ်များ.
သငျသညျကိုရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် homebuying အစီအစဉ်များ သင်သည်သင်၏မြို့သို့မဟုတ်ပြည်နယ်တစ်အိမ်မှာမဝယ်ကူညီရန်.
Smartasset.com သငျသညျအိမျကိုငှားရမ်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ကူညီရန်ကောင်းသော tools တွေရှိပါတယ်. ဒါဟာသင်တအိမ်ဝယ်ခြင်းငှါတတ်နိုင်လျှင်သင်လေ့လာသင်ယူကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
ဒါဟာသင့်ရဲ့အိမျနီးခငျြးနှငျ့ဆကျဆံရေးကောငျးရှိသည်ဖို့အမြဲအရေးကြီးသည်, သငျသညျအသကျရှငျနေရာတိုင်းမှာ. ဒါပေမဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကိုသငျ့အိမျနိုငျငံမှာထက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ဥပမာ, သင့်နိုင်ငံမှာ, သငျသညျနေ့၏မည်သည့်အချိန်တွင်သင်၏အိမ်နီးချင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ,. USA တွင်, သူတို့မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုမတိုင်မီလူတွေကမကြာခဏဖုန်းဆက်ပါ. သင်တို့သည်လည်းသင်၏အိမ်နီးချင်း၏လေးစားမှုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါ. အတော်များများကအမေရိကန်တွေပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများထင်. သင်သည်သူတို့၏အိမ်၏မျက်နှာစာမှာသူတို့ရဲ့ခြံသို့မဟုတ်ပန်းခြံ၌ကျင်လည်လျှင်သူတို့ကကြိုက်တယ်မပြုစေခြင်းငှါ.
သင်လုပ်နေပါတယ်ဘယ်လောက်ဆူညံသံကိုသတိပြုမိဖြစ်သင့်. အကြားတိတ်ဆိတ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ 8 p.m. နှင့် 8 နံနက်။, USA တွင်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောပုံမှန်အချိန်.
သင်သည်သင်၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိုလျှင်, ဒီသင့်မိသားစုများအတွက်ကောင်းသောနိုင်ပါတယ်. အသစ်သောအိမ်နီးချင်းများအတွက်ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါ, သင်သည်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသူတို့နှင့်ရယူထားသောတစ်မုန့်ညက်သို့မဟုတ်ပန်းကန်ကိုရောက်စေနိုင်ပါတယ်.
သင်သည်သင်၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထဲကတစ်ခုနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, သူတို့ကိုစကားပြောနှင့်အခြေအနေကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ. ဥပမာ, တစ်စုံတစ်ဦးကညမှာအသံကျယ်ဖြစ်ခြင်းလျှင်, သင်၏သားသမီးအိပ်ပျော်နေသောကြောင့်သူတို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်နိုင်လျှင်ကြင်သူတို့ကိုမေးဖို့. သင်ပိုမိုအကူအညီလိုလျှင်သင်ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့အိမ်ရှင်ကပြောပြနှင့်သင်၏အိမ်နီးချင်းပြောပြရန်သူတို့ကိုမေးမြန်းနိုင်.